कुन तरकारीमा कति विषादी ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
कुन तरकारीमा कति विषादी ?
सरिता थारु ।
‘प्लाष्टिक प्रयोग निरुत्साहन वातावरण संरक्षणमा योगदान’ । यहि नाराका साथ आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइँदैछ ।
नेपालमा यो दिवस मनाउन लागेको दुई दशक पुगेको छ । हरेक वर्ष यस्तै नाराका साथ दिवस मनाइदै आइएको छ । तर, यो दिवसको महत्व नारामा नै सिमित रहेको पाईन्छ ।
कुन खाद्यान्नको मुल्य कति ? गुणस्तर कस्तो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्छन् उपभोक्ता । तर, यी प्रश्न आजसम्म एकादेशको कथा जस्तो मात्र रहेको पाईन्छ । ‘मन लागे खरिद गर्नुस्, नत्र नगर्नुस्’ भन्ने टर्रो जवाफमा नै उपभोक्ताले चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था छ ।
यसैगरी बजारमा पाइने खासगरी तरकारीको कुरा गर्ने हो भने त्यसको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने कुराको ज्ञान आम उपभोक्तालाई हुँदैन । नेपालमा सातै प्रदेशमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला छन् । तर, तिनको सक्रियता र प्रभावकारीतामा भने आम विश्वास देखिँदैन ।
काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा दैनिक विषादीको जाँच हुने गरेको छ । विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला कालिमाटीका नायब प्राविधिक सहायक जाग्यश्वर शर्मा भन्छन् – ‘प्रत्येक दिन बिहान ६ बजे तरकारीको विषादी जाँच हुन्छ ।’ उनका अनुसार तरकारीमा विषादी जाँच भए पछि त्यो खान योग्य छ–छैन, त्यसै आधारमा मात्रै बजारमा पठाउने–नपठाउने टुंगो लाग्छ ।
कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारको यो आर्थिक वर्षको आठ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने १ हजार ५ सय ६९ तरकारीको विषादी जाँच नमूना संकलन गरिएको छ । शर्माका अनुसार तरकारीको विषादी तीन भागमा वर्गिकरण गरेर हेरिन्छ ।
पहिलो, हरियो रङ्ग
हरियो रङ्गको वर्गमा पर्ने तरकारी खाना योग्य हुने शर्मा बताउँछन् । कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारको आठ माहिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने विषादी जाँच नमुना संकलन गरिएका मध्ये १ हजार ५ सय ५२ तरकारी नमूना खान योग्य छन् । ३५ प्रतिशतसम्म विषादी भएको खण्डमा त्यसलाई हरियो रङ्गमा राखिने छ ।
दोस्रो, पहेलो रङ्ग
पहेलो ङ्गको वर्गमा परेका तरकारी उपभोग गर्नका लागि केही दिन पर्खिनु पर्नेे शर्मा बताउँछन् । यस वर्गमा परेका तरकारी केही दिन आइसोलेशनमा राखी फेरि विषादीको जाँच गरी बजारमा पठाउने गरिएको छ ।
कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारको आठ माहिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने तरकारी विषादी जाँच नमूना संकलन गरिएको मध्ये नौ तरकारी नमूना यस वर्गमा परेका छन् । ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म विषादी भएको खण्डमा पहेलो रंगमा राखिने छ ।
तेस्रो, रातो रङ्ग
रातो वर्गमा पर्ने तरकारी उपभोग गर्न नमिल्ने शर्माले बताए । यस वर्गमा परेका तरकारी सबै नष्ट गर्नु पर्ने हुन्छ । आठ महिनामा यस वर्गमा ८ तरकारी नमुना परेका छन् । उनका अनुसार यो वर्गमा परेका तरकारीलाई पूर्णरुपमा नष्ट गरिन्छ । ४५ प्रतिशतभन्दा बढी विषादीको मात्र रहेको खण्डमा त्यो तराकारी रातो रङ्गमा पर्दछ ।
कुन तरकारीमा बढी विषादी ?
तरकारीमा विषादीको कुरा गर्ने हो भने आठ महिनामा १ हजार ५ सय ६ तरकारीमा विषादीको परिक्षण गरिएको छ । जसमा १ हजार ४ सय ८९ तरकारी हरियो, ९ वटा पहेँलो र ८ वटा रातो रङ्गमा परेका छन् । यसैगरी सबैभन्दा बढी काउली र फर्सीमा बढी विषादी देखिएको प्रयोगशालाले जनाएको छ । त्यसपछि टमाटर, काँक्रा र लौकामा विषादी बढी पाइएकोे छ ।
विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला कालिमाटीका नायब प्राविधिक सहायक जाग्यश्वर शर्माको सल्लाह अनुसार ‘हेर्दा राम्रो चिल्लो देखिने तरकारी नकिन्ने, हेर्दा ओइलाएको र आकार नमिलेको तरकारी किन्ने, किनेको तरकारी तुरुरन्तै प्रयोग नगर्ने, बजारबाट ल्याएको तरकारी ३ देखि ४ घण्टा पानीमा भिजाएर राख्ने, बजारबाट ल्याएको तरकारी अर्को दिन प्रयोग गर्ने ।’
कुन क्षेत्रमा विषादीको बढी प्रयोग ?
कालिमाटी प्रयोगशालाका अनुसार चितवनबाट आयात हुने तरकारीमा धेरै मात्रामा विषादी देखिएको छ । त्यसपछि धादिङ, काभ्रे र सर्लाहीबाट आयत हुने तरकारीमा विषादीको मात्रा बढी देखिएको छ । यसैगरी चीन र भारतबाट आयत हुने तरकारी मध्ये भारतको तरकारीमा बढी विषादी भेटिने गरेको छ । यस आर्थिक वर्षको पछिल्लो आठ महिनामा १ हजार ५ सय ६ तरकारीमा विषादीको परिक्षण गरिसकिएको छ ।
तरकारीमा किरा लाग्न थालेपछि वा किरा लाग्ने भयले विषादीको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । त्यसैगरी लामो समयसम्म ताजा राख्नकालागि पनि कतिपय केमिकलको प्रयोग हुने विज्ञहरुको अनुभव रहेको छ ।